Miyuu Jurgen Klopp U Dhibtoonayaa Maskaxdiisii Zeljko Buvac? Xaqiiq Soo Baxday Ayaa Ka Jawaabaysa. – GOOL24.NET
Miyuu Jurgen Klopp U Dhibtoonayaa Maskaxdiisii Zeljko Buvac? Xaqiiq Soo Baxday Ayaa Ka Jawaabaysa.
Kooxda Liverpool ayaa bishii April ee sanadkan 2018 waxay shaacisay in caawiyihii Jurgen Klopp ee Zeljko Buvac uu kooxda ka maqnaanayo ilaa dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay laakiin tan iyo maalintii uu Zeljko Buvac ka baxay Liverpool waxay jamaahiirta Reds dareemeen in uu isbadal layaab lihi ku yimid kooxdooda gaar ahaan kulamada Champions league ee martida ah.
Caawiyihii Jurgen Klopp ee Zeljko Buvac ayaa loo tixgaliyaa in uu ahaa gacantiisa midig iyo waliba maskaxdiisa marar badan uu kala tashan jiray xaaladaha kooxdiisa waxayna hore uga soo wada shaqeeyeen horyaalka Germany oo ay taariikh fiican ku soo yeesheen.
Laakiin xogtu been ma sheegto, waxaana si cad u muuqata in Liverpool ay si wayn u soo dhibtoonaysay tan iyo maalintii uu caawiyihii Klopp ee Zeljko Buvac uu Anfield ka baxay waxaana lagu soo bandhigay xogta isbarbar dhiga kulamadii uu Zeljko Buvac Liverpool la soo shaqeeyay Champions League iyo kulamadii uu maqnaa.
Haddii aan dib idiin xusuusiyo waxa uu caawiyihii Klopp ee Zeljko Buvac uu kooxda ka baxay waqti kooban ka hor markii ay Liverpool isku diyaarinaysay kulankii lugtii labaad ee afar dhamaadkii UEFA Champions League waana waqtiga ay xogta la’aantiisa Liverpool ka soo bilaami doonto.
Liverpool ayaa 7 kulan oo Champions League ah soo guulaysatay markii uu Zeljko Buvac la shaqaynayay Klopp waxayna soo gashay 4 barbaro ah iyada oo aan hal guuldaro soo gaadhin 11 kii kulan ee uu Zeljko Buvac la soo shaqeeyay Klopp ee tartanka Champions League.
Laakiin haddii aan xogtan barbar dhigno maalintii uu Zeljko Buvac ka garab dhaqaaqay Klopp waxay Liverpool soo ciyaartay lix kulan oo Champions League ah waxayna soo guulaysatay 2 kulan oo kaliya iyada oo soo guuldaraysatay 4 kulan oo kale.
Guuldaradii ugu horaysay ee Liverpool soo gaadhay ee waqtigii uu Zeljko Buvac ka baxay waxay ahayd isla todobaadkii uu ugu horeeyay ee uu Klopp iska agwaayay maskaxdiisii Zeljko Buvac waxayna Reds guuldaro 4-2 ahi ka soo gaadhay AS Roma balse waxay ku badbaaday natiijadii kulankii Anfield ee uu Zeljko Buvac goob jooga u ahaa.
Kadib waxaa Liverpool ugu xigay kulankii finalkii Champions League waxayna guuldaro 3-1 ah kala kulantay Real Madrid waxaana hadda la dareemay in Klopp uu si wayn ugu dhibtooday maqnaanshaha gacantiisii midig ee Zeljko Buvac taas oo ay jamaahiirta Liverpool hadda si cad u arki karaan.
Ugu danbayn tan iyo markii uu Zeljko Buvac ka baxay Liverpool waxay ku fashilantay in ay hal kulan oo ay Anfield ka maqan tahay guulaysato laakiin labadii kulan ee ay muddadan Anfield ku ciyaartay waxay guul ka gaadhay kooxaha PSG iyo Red Star Belgrade.